Taageerayaasha Liverpool Oo Xarunta Tababarka Man United ee Australia Qasay Iyo Diyaarad Ay Dul Mariyeen. - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Taageerayaasha Liverpool Oo Xarunta Tababarka Man United ee Australia Qasay Iyo Diyaarad Ay Dul Mariyeen.
July 11, 2019 at 10:20 Taageerayaasha Liverpool Oo Xarunta Tababarka Man United ee Australia Qasay Iyo Diyaarad Ay Dul Mariyeen.2019-07-11T10:20:02+01:00 CAYAARAHA
Xifiltanka u dhexeeya kooxaha Manchester United iyo Liverpool waa mid joogto ah isla markaana waji badan yeelan kara, waxayna taageerayaasha kooxda Liverpool ee dalka Australia ay sameeyeen arin hadal hayn badan ka samaynaysa baraha bulshada iyo saxaafada.
Sida laga war qabay tababare Solskjaer iyo ciyaartoyda kooxdiisa Manchester United ayaa dhawaan u duulay dalka Australia waxayna ka degeen magaalada Perth ee dhacda galbeedka dalkan waxayna tababarka ku qaadanayeen WACA Ground.
Laakiin tababarkii furnaa ee ay ciyaartoyda Manchester United tababarka ku qaadanayeen ee WACA Ground waxay taageerayaasha Liverpool soo dul mariyeen diyaarad ay ku soo xidheen boodh lagu soo xardhay erayo loogu maadsanayo Man United.
Boodhka lagu soo xidhay diyaarada ay taageerayaasha Liverpool dul mariyeen garoonka furan ee ay Man United tabaabraka ku qaadanaysay ee WACA Ground waxaa lagu soo qoray: “‘Liverpool FC – 6 X EUROPEAN CHAMPIONS.’
Taas oo la micno ah “kooxda kubbada cagta Liverpool ee lixda jeer ku soo guulaystay koobka kooxaha Yurub ee Champions league”.
Jamaahiirta kooxda Liverpool ayaan wali ilaawin qaabkii ay taageerayaasha Man United u lasafteen kooxaha Real Madrid iyo Tottenham ee labadii kulan final ee Champions league ugu danbeeyay oo ay Reds ka soo ciyaartay koobka ay ku soo guulaysteen.
Min halyayada Man United ilaa taageerayaasha Red Devils ayaan wax qarsoodi ah ka dhigan in ay Liverpool kaga soo horjeedeen finalkii Champions League ee Real Madrid ee sanadkii 2008 kii markaas oo ay farxad wayn ka heleen in Liverpool guuldaro la soo baday.
Markale Liverpool ayaa xili ciyaareedkii la soo dhaafay si xidhiidh ah ugu soo baxday finalkii Champions Leauge waxayna magaalada Madrid isku wajaheen Tottenham laakiin taageerayaasha Man United ayaa markale rajaynayay in Liverpool guuldaro la bado.
Balse Liverpool ayaa koobkeedii lixaad ee Champions League waxay ugu soo guulaysteen caasimada Madrid, waxayna tan iyo markaas ku maadsanayeen Man United oo ay hadda haystaan laba jibaarka 3 koob ee ay United ugu soo guulaysatay Champions league.
Laakiin arinta cusub ee ay sameeyeen taageerayaasha Liverpool ee ay diyaarada boodhka la soo saaray ku dul mariyeen garoonka dusha ka furan ee ay United tababarka ku qaadanayso ayaa ah mid sii hurinaya colaada labada kooxood ee England ugu saamaynta badan.
Ilaa hadda lama kala oga, haddii diyaarada lagu soo xidhay boodka ‘Liverpool FC – 6 X EUROPEAN CHAMPIONS.’ uu hal shaqsi soo koraysta iyo haddii ay koox taageerayaasha Liverpool ahi iska kaashadeen.
Baraha bulshada iyo warbaahinta England ayaa hadda wax qoraya dhacdadan iyada oo taageerayaasha Liverpool ku raaxaysanayaan xaaladaha kala duwan ee ay kooxdooda Liverpool iyo Man United ku kala jiraan.
« Rasmi:-Muqdisho City club Oo Saxaafada U Soo Bandhigtay Macallinkeeda Cusub
Malayshiyaad ka yimid Galmudug oo dad shacab ah ku laayay gudaha Puntland »